Ukufudumala kwe-IP: Yakha igama lakho elitsha ngalesi sicelo sokufudumeza i-IP | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 25, 2020 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 25, 2020 Douglas Karr
Ukuba unesiseko sokubhalisela ubungakanani obubalulekileyo kwaye kuye kwafuneka ukuba ufudukele kumnikezeli wenkonzo ye-imeyile (i-ESP), kusenokwenzeka ukuba ubukhe wakwintlungu yokuphelisa igama lakho elitsha. Okona kubi… khange uyilungiselele kwaye kwangoko uzifumane usengxakini yenye yeengxaki ezimbalwa:
Umboneleli wakho weNkonzo omtsha we-imeyile ufumene isikhalazo kwaye wakuvalela kwangoko ekuthumeleni i-imeyile eyongezelelweyo de ube uwusombulule umba.
Umnikezeli weenkonzo ze-Intanethi okanye inkonzo yokujonga igama akayamkeli idilesi yakho ye-IP kwaye uvimba umkhankaso wakho omkhulu.
Umboneleli ngeNkonzo ye-Intanethi akanalo igama ledilesi yakho entsha ye-IP kunye neendlela kuyo yonke i-imeyile yakho kwifolda ye-junk.
Ukuqala kunyawo lwasekunene ngo Ukufudumala kwe-IP Isicwangciso sibaluleke kakhulu xa usiya kumnikezeli wenkonzo entsha ye-imeyile. Uninzi lwaBanikezeli beenkonzo ze-imeyile abenzi sivumelwano sikhulu malunga nayo… bakukhumbuza nje ukuba ufudumeze idilesi ye-IP entsha. Iziphumo ezilungileyo, nangona kunjalo, ayingomsebenzi olula:
Awufuni kuthatha nayiphi na ingozi kuthumelo lwakho lokuqala, ke ukwahlula isiseko sababhalisi bakho kubabhalisi bakho ababandakanyekileyo kubalulekile. Ukuba umntu akazange avule okanye acofe i-imeyile ezinyangeni… ngekhe ufune ukubanakho kwimikhankaso yakho yokuFudumala kwe-IP.
Phantse zonke iziseko zedatha yababhalisi ineedilesi ze-imeyile ezimbi kunye needilesi zogaxekile ezingasuswanga okanye zicocwe. Ngaphambi kokuba uthumele umkhankaso we-IP Warming, ufuna ukucoca ezi dilesi ze-imeyile kwiziko ledatha yakho.
Yonke i-ISP inomthamo owenziwe ngeedilesi ze-imeyile ukuqala ngayo nokwakha igama ngokuhamba kwexesha kunye nazo. Umzekelo, uGoogle ufuna ukuba uthumele isixa esincinci ekuqaleni, emva koko ukhule isixa ngokuhamba kwexesha. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ucwangcise ngononophelo kwaye ucwangcise imikhankaso yakho.
Emva kokuyila kunye nokuphuhlisa isicwangciso esiphumeleleyo sokufudumala kwe-IP kumakhulu abathengi, amaqabane am kunye nam Highbridge sithathe isigqibo sokuphuhlisa eyethu inkonzo kulo nyaka uphelileyo ukwenza lula inkqubo. Iimpawu ze-IP Warm zibandakanya:
U kucocwa Ukucocwa kwangaphambili kwedatha yokubhalisela ukunciphisa ii-bounces, iidilesi zethutyana ze-imeyile, kunye nemigibe yogaxekile. Sicinezela ezi rekhodi kumaphulo aphuhlisiweyo kwaye sibuyisela idatha kuwe ukuze uhlaziye iirekhodi zakho zomthombo.
Ukubekwa phambili -Sibeka phambili ababhalisile ngokusekwe kukuzibandakanya kwabo nenkampani ukuqinisekisa ukuba uninzi lwababhalisi abasebenzayo bathunyelwa iphulo lokufudumeza i-IP kuqala.
Ubukrelekrele bommandla Uninzi lweengcebiso zokufudumeza i-IP zikuxelela nje ukuba ubonise i-imeyile yakho nge-ISP; Nangona kunjalo, ayisiyonto ilula njengokujonga indawo yedilesi ye-imeyile. Ngokwenyani sisombulula isizinda kwaye sinobukrelekrele kule nkonzo bayisebenzisayo ukuphucula amaphulo. Oku kubaluleke kakhulu kwiinkampani ze-B2B ezithumela ikakhulu kwimimandla yeshishini kwaye hayi ii-imeyile zabathengi eziqhelekileyo.
kwiShedyuli -Sibuyisela uluhlu lwephulo kunye neshedyuli yokuthumela ekhuthazwayo kuwe ukuze ungenise ngokulula uluhlu kwaye ucwangcise okuthunyelwayo. Into ekufuneka uyenzile kukuyila iphulo kunye neshedyuli yokuthumela!
Ngaba ufudukela kwidilesi ye-IP ekwabelwana ngayo nge-ESP yakho entsha?
Nokuba ungumthengisi omncinci we-imeyile ohamba kwidilesi ye-IP ekwabelwana ngayo noMboneleli weNkonzo ye-imeyile, ukucocwa kunye nokulungiselela umkhankaso esikwenzela kona kuya kukugcina ngaphandle kwengxaki.
Imephu yeNdlela yokuFudumala
Sisebenza ukuphucula iqonga ngakumbi nangakumbi ngokudibanisa idatha kunye nokuthumela okucwangcisiweyo nge-API ukuze iinkampani zenze kancinci. Okwangoku, ubukhulu becala yinkonzo yokubuyela umva- kodwa sisebenza ngokuzinzileyo ngaphambili nasekuphuculweni.
Ukuba ulungiselela ukufudukela kuMboneleli weNkonzo ye-imeyile, ngoku lixesha elihle lokusebenzisa iqonga njengoko sixhasa ngakumbi kwaye sisebenzisana kakhulu nabathengi bethu!
Qalisa ngokufudumala kwe-IP
Ukubhengezwa: Ndiliqabane IP eshushu.
tags: izinikele ipukuhanjiswa kwee-imeyileigama le-imeyileUmboneleli wesevisi ye-imeyilespIP igamaip kushushuip ukufudumeza usetyenzisoinkonzo yokufudumeza ipekwabelwana ngayo ip